» သုတ ဗိုလ်ကြက် ၏ မှတ်စု
ဗိုလ်ကြက် ၏ မှတ်စု
ဘ၀ တဲ့ နှစ်လုံးထဲပေမဲ့ ကာလကတော့ အရှည်ကြီး မှတ်သားစရာတွေလည်းမဆုံးနိုင်ဘူး …. မှတ်နိုင်သလောက်လေးတွေတော့ စုစည်းထားတယ်……..ဗိုလ်ကြက်
Hey there! Thanks for dropping by ဗိုလ်ကြက် ၏ မှတ်စု! Takealook around and grab the RSS feed to stay updated. See you around!
ဖတ်စရာမှတ်စရာ ebook ကဏ္ဍ
ကလေးငယ်တွေကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့ (၁၁)နည်း
Filed under: သုတ, ဆောင်းပါး by bokyat — Leaveacomment	August 3, 2011
ပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးငယ်တွေမှာ တူညီတဲ့အချက်တွေရှိတယ်လို့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ တွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီတူညီချက်တွေက မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ အကောင်းမြင်တတ်ခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတွေ ဖြစ်တယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အကြံ(၁၁)ချက်နဲ့ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့ကလေးတစ်ယောက် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်အောင် ထုတ်ဖော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ကလေးငယ်ကို ဆော့ကစားဖို့အချိန်ပေးပါ။ နေ့စဉ်ဘဝကို စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ သတ်မှတ်မထားပါနဲ့
အမေရိကန် ကလေးပညာဖွံ့ဖြိုးရေး ပညာရှင် Thomas. Armstrongက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆော့ကစားခြင်းက အစီအစဉ်ဆွဲပြီး သတ်မှတ်တဲ့ကစားနည်းတွေထက် ကျောင်းနေစ ကလေးငယ်တွေကို ပိုကျန်းမာစေတယ်လို့ဆိုတယ်။
ကလေးငယ်ရဲ့အချိန်တွေကို ကျောင်းစာ၊ သင်တန်းတွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်အောင် မိဘတွေစီစဉ်မထားသင့်ဘူး။ ကလေးငယ်တိုင်းဟာ အားလပ်ချိန်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆော့ကစားချိန်တွေကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ သူတို့ရဲ့တွေးတောစွမ်းရည်တွေကို အတားအဆီးမရှိ ထုတ်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ပင့်ကူအိမ်ဖွဲ့နေတာကို သူတို့စိမ်ပြေနပြေ ကြည့်ပါစေ။ ပိုးစုန်းကြူး ဘာလို့အလင်းဖြာသလဲဆိုတာကို သူတို့လေ့လာပါစေ။ သူတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်း သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ လောကကြီးအကြောင်းကို သူတို့စူးစမ်းပါစေ။ သင်လည်း သင်ခြေလှမ်းကိုအရှိန်လျော့ အချိန်ဇယားတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး ကလေးနဲ့စည်းဝါးကျကျ ဘဝကိုခံစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
(၂) တခြားသူကို ဂရုစိုက်ချစ်ခင်တတ်ဖို့ သွန်သင်ညွန်ပြပါ
ပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးငယ်ဟာ တခြားလူနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ခံစားချက်ကို ခံစားနားလည်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒီလိုခံစားချက်ကို တခြားကလေးကူညီတာ၊ လူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆံဆက်တာကနေ ရနိုင်တယ်။ ကလေးနဲ့အတူ ကစားစရာတွေ သိမ်းဆည်းတာကို သင်လုပ်နိုင်သလို ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံက ကလေးငယ်တွေအတွက် ရံပုံငွေတွေကို အတူထည့်သွင်းတာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာလုပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း ပါဝင်နိုင်အောင် ကလေးငယ်ကို အားပေးတတ်ရပါမယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ ဆန်းစစ်ချက်အရ ကလေးငယ်တွေဟာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက တခြားလူကိုကူညီရင်း အပျော်တွေကို ခံစားမိတတ်တယ်။ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာလည်း တခြားလူကို ကူညီတဲ့အကျင့် ရှိသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(၃) အားကစားလုပ်ဖို့ ကူညီအားပေးပါ
ကလေးငယ်နဲ့အတူ ဘောလုံးဆော့ကစားတာ၊ စက်ဘီးစီးတာ၊ ရေကူးတာ…. တွေဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာအောင် လေ့ကျင့်ပေးရုံသာမက သူ့ကို ပိုဖော်ရွေပျော်ရွှင်အောင် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေက ကလေးငယ်ရဲ့စိတ်ဖိအားနဲ့ ခံစားချက်ကို ဖြည်လျော့ပေးနိုင်သလို သူ့ကိုယ်သူကိုလည်း နှစ်သက်စေပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အားကစားကြောင့်ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ကြီးပြင်းမှုတွေကိုလည်း ခံစားစေပါတယ်။
ကလေးငယ်နဲ့ ရယ်စရာတွေပြောပြီး အမြဲပြုံးရယ်ပါ။ ပျော်စရာသီချင်း၊ ရယ်စရာသီချင်းတွေကို စပ်ဆိုပါ။ ပက်ပက်ဟက်ဟက် ရယ်မောခြင်းက ကလေးနဲ့သင့်ကို ကောင်းကျိုးတွေရစေပါတယ်။ အားပါးတရ ရယ်မောခြင်းက အကောင်းဆုံး အားကစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ဆန်းသစ်တဲ့ ချီးမွမ်းမှုတွေရှိပါစေ
ကလေးငယ်မှာ ကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေရှိတဲ့အခါ “ကောင်းတယ်”ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းသာမက တိကျတဲ့ချီးကျူးမှုတချို့လည်း လိုအပ်တယ်။ သူရဲ့ဘယ်အပြုအမူက လူကိုပိုသတိထားမိစေကြောင်း ဒါမှမဟုတ် အရင်တစ်ခေါက်ထက် ပိုတိုးတက်လာကြောင်း အသေးစိပ်တချို့ကို ပြောသင့်တယ်။ ဥပမာ “ဒီမနက် ကျောင်းပေါက်စောင့် ဦးဦးကို သမီးအရင်စနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်…. သမီးသိပ်လိမ္မာတာပဲ” ဆိုသလိုမျိုး။ ဒါပေမဲ့ ချီးကျူး၊ ချီးမွမ်းပြောတဲ့နေရာမှာ ကလေးငယ်တွေအတွက် မှားယွင်းတဲ့အကျင့်မဖြစ်အောင်လည်း သတိထားရပါတယ်။ တချို့မိဘတွေက လက်ဆောင်၊ ငွေကြေးတွေသုံးပြီး ကလေးငယ်ကို ချီးမွမ်းကြတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကလေးငယ်ရဲ့ အဓိကစိတ်က ကောင်းမွန်တဲ့အပြုအမူပေါ် မဟုတ်တော့ဘဲ လက်ဆောင်ငွေကြေးတွေအပေါ် သက်ရောက်သွားတတ်တယ်။ ကိစ္စတစ်ခုဆောင်ရွက်ပြီးတိုင်း ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ အားရကျေနပ်မှုကို ကလေးငယ်ခံစားအောင် မိဘတွေကသိစေသင့်တယ်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ ချီးကျူးတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး။
(၆) ကျန်းမာတဲ့အစားအစာတွေ စားပါစေ
ကျန်းမာတဲ့အစားအစာတွေဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေရုံမက စိတ်ခံစားမှုကိုလည်း တည်ငြိမ်စေတယ်။ ထမင်းစားတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် သွားရေစာစားတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာတာကို အဓိကထားပြီး စားသုံးသင့်တယ်။ ဥပမာ– အဆီနည်း၊ အချိုနည်းတဲ့အစာ၊ လတ်ဆပ်တဲ့အစာ စတာတွေကို မျှမျှတတ စားသုံးသင့်ပါတယ်။
(၇) သူ့ရင်ထဲ ကိန်းဝပ်နေတဲ့ အနုပညာပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ကို ဖော်ထုတ်ပါ
“Mozart Effect” မိုးဇက်သက်ရောက်မှုဆိုတာ မရှိဘူးလို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အတည်ပြုခဲ့ပေမယ့် ကလေးတော်တော်များများဟာ ဂီတ၊ ပန်းချီ၊ အကစတာတွေနဲ့ ထိတွေ့မိတာနဲ့ ပျော်ရွှင်မြူးတူးလာတတ်ကြတယ်။ ဒီအရာတွေနဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့စိတ်လောကကို ပြည့်ဖြိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ ဆန်းစစ်ချက်မှာ ကလေးငယ်တွေဟာ အတီးတွေနောက်လိုက်ပြီး ကခုန်တာ ဒါမှမဟုတ် ရောင်စုံခဲတံနဲ့ လျှောက်ခြစ်တာ စတာတွေဟာ သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်၊ ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေ ပန်းချီဆွဲဝါသနာပါတာ၊ ကတာကို နှစ်သက်တာ၊ ဂီတတူရိယာတွေကို တီးမှုတ်တာတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ နှစ်သက်အားကျစေပါတယ်။
(၈) မကြာခဏ ပွေ့ဖက်ပါ
ခပ်ဖွဖွပွေ့ဖက်မှုတစ်ခုက အဆုံးမရှိတဲ့ ဂရုစိုက်ခြင်းတွေ၊ အသံမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို သယ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ နွေးထွေးတဲ့ပွေ့ဖက်မှုက လမစေ့ဘဲမွေးတဲ့ ကလေးငယ်ကို ပိုကျန်းမာစေတယ်၊ ပိုသွက်လက်ဖော်ရွေစေတယ်၊ စိတ်ခံစားချက်ကို ပိုတည်ငြိမ်စေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ လူကြီးတွေအတွက်တော့ နွေးထွေးတဲ့ပွေ့ဖက်မှုက စိတ်ဖိအားကို လျော့နည်းစေတယ်၊ ခံစားချက်ကို တည်ငြိမ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(၉) ရင်ဘတ်နဲ့ သေသေချာချာနားထောင်ပါ
ဘယ်အရာကမှ ရင်ဘတ်နဲ့နားထောင်တာလောက် ကလေးငယ်ကို ပိုဂရုစိုက်ခံရတယ်လို့ ထင်စေတဲ့အရာ မရှိတော့ပါဘူး။ သေသေချာချာ နားထောင်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါသလား? ကလေးပြောတဲ့စကားကို နားတစ်ဘက်ထဲနဲ့ နားမထောင်ပါနဲ့။ လုပ်လက်စအလုပ်ကို ရပ်ပြီး သူပြောတဲ့စကားကို စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ပေးပါ။ သူပြောလိုရာကို ပြီးတဲ့အထိ စိတ်ရှည်ရှည်ထား နားထောင်ပေးပါ။ ကြားဖြတ်ပြီး စကားမပြောပါနဲ့။ အလျင်စလို မဖြေရှင်းပါနဲ့၊ မြန်မြန် မပြောခိုင်းပါနဲ့။ သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာကို သင် ဆယ်ခါပြန်နားထောင်ခဲ့ဖူးလည်း သေသေချာချာ စိတ်ပါလက်ပါ ထပ်နားထောင်ပေးလိုက်ပါ။ ကလေးငယ်ကို ကျောင်းပို့ကျောင်းကြိုချိန် ဒါမှမဟုတ် ညအိပ်ရာဝင် ချော့သိပ်တဲ့အချိန်တွေဟာ နားထောင်တဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။
(၁ဝ) အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့
ကလေးငယ်တိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ မိဘတိုင်းမျှော်လင့်ကြတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ သူတို့ရဲ့အပြုအမှုတွေကို အလျင်စလို ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ချင်ကြတယ်၊ ပြောင်းလဲချင်ကြတယ်။ ဥပမာ စားပွဲခုံသုတ်တာ မပြောင်ဘူး၊ ပစ္စည်းကို သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲ ပြန်ထားခိုင်းတာတွေဖြစ်တယ်။ အရာရာတိုင်းကို အကောင်းဆုံးတောင်းဆိုရင် ကလေးငယ်တွေရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ လုပ်ရဲတဲ့သတ္တိတွေ ကျဆင်းလာစေတတ်တယ်။ ကလေးငယ်တွေ တစ်ခုခုအမှားလုပ်မိတဲ့အခါ အလျင်စလို ပြုပြင်မပေးခင် “ဒီကိစ္စက ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ လုံခြုံရေးမှာ အကျုံးဝင်လား! မဝင်လား!” ၊ “နောင် ၁ဝနှစ်အကြာမှာ ဒီကိစ္စအရေးပါနိုင်သေးလား?” ဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားပါ။ တကယ်လို့ အရေးမပါဘူးဆိုရင် ကလေးငယ်ဘာသာ လုပ်ပါစေ။
(၁၁) ကိစ္စတွေ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကို လမ်းညွှန်သွန်သင်ပါ
ဖိနပ်ကြိုးချည်တာကို သင်ယူတာကအစ မျဉ်းလမ်းဖြတ်ကူးတာကအဆုံး ခြေလှမ်းတိုင်း၊ သင်ယူမှုတိုင်းဟာ ကလေးငယ်ကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစေတဲ့ သင်ခန်းစာတွေဖြစ်တယ်။ ကိစ္စရပ်တွေကို သူ့ဘာသာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အင်အားရှိပြီလို့ သူ့ကိုယ်သူ သတိပြုမိတဲ့အခါ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ အားရကျေနပ်ခြင်းတွေကို သူခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
အထက်ကအချက်တွေအားလုံးကို လူကြီးမိဘတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်သင့်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်မှ ကလေးငယ်တွေကို ပျော်ရွှင်စေဖို့ ဆုံးမသွန်သင်နိုင်မယ် မဟုတ်ပါလား?
Comment မွေးနေ့ သက္ကရာဇ် သိလိုရှိရင် ဘယ်နေ့မွေးလည်း Excel ထဲမှာ ကြည့်မယ်
Filed under: သုတ by bokyat — Leaveacomment	July 18, 2011
မွေးနေ့ သက္ကရာဇ် သိလိုရှိရင် ဘယ်နေ့မွေးလည်း Excel ထဲမှာ ကြည့်မယ် ပြက္ခဒိန် မလို တော့ဘူးပေါ့
Cell A1 ထဲမှာ မွေးနေ့ ဥပမာ – 6/14/1981 ထည့်တယ်
ပေါ်ချင်တဲ့ Cell ထဲမှာ ဥပမာ- Cell A2 ထဲမှာ =TEXT(WEEKDAY(A2), “ddd”) ထည့်လိုက်ရင် Sun တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတာ ပေါ်လာမယ်
Sunday လို့အပြည့်အစုံပေါ်ချင်ရင် “ddd” နေရာမှာ “dddd” လို့ပြောင်းထည့်လိုက်ပေါ့ Comment Password အကြောင်း
Password နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတိပေးချက် တွေကို မကြာခဏ ကြားဖူးကြမှာပါ။
အင်္ဂလိပ်စာလုံး အကြီးနဲ့ အသေးတွဲသုံးဖို့၊ နံပါတ်နဲ့ အက္ခရာ တွဲသုံးဖို့၊
#%&!အစရှိတဲ့ Special Character တွေ ထည့်သုံးဖို့၊ အဘိဓာန် ထဲက
စကားလုံးတွေ မသုံးဖို့၊ စာလုံး အရေအတွက် များများ သုံးဖို့၊ QWERTY
လိုမျိုး အစဉ်လိုက် စာလုံးတွေ မသုံးဖို့ ဆိုတဲ့ သတိပေးချက်မျိုး တွေကို
ကြားရတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုသူ အများစုကတော့
ဘာအကြောင်းကြောင့် ဒီလို သတိပေးတယ် ဆိုတာကို သဘောမပေါက် ကြပါဘူး။
အလွယ်တကူ မှတ်လို့ မရအောင် အဲဒီလို လုပ်ခိုင်းတယ် လို့ပဲ ထင်တတ်ပါတယ်။
တကယ့် အကြောင်းရင်းမှန်ကတော့ အလွယ်တကူ မှတ်လို့ မရရုံတင် မကပါဘူး။
Password သူခိုးတွေ သုံးတတ်တဲ့ အဘိဓာန် တိုက်ခိုက်မှု (Dictionary Attack)
၊ ဘရုဖို့စ် တိုက်ခိုက်မှု (Brute Force Attack) စတဲ့ နည်းတွေကနေ
ရှောင်နိုင်အောင်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Password သူခိုး များဟာ ရေးထားပြီးသား
ပရိုဂရမ်တွေ Script တွေကို သုံးပြီး Password ဖြည့်ရမည့် နေရာမှာ
ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ Password တွေကို အလိုအလျောက် ဖြည့်ကြည့်ကြပါတယ်။
အဲဒီလို ပရိုဂရမ်တွေ ကလည်း ကိုယ်တိုင် ရေးစရာ မလိုပဲ အင်တာနက်မှာတင်
အလွယ်တကူ ရှာလို့ ရနိုင် ပါတယ်။
အဘိဓာန် တိုက်ခိုက်မှု (Dictionary Attack) ဆိုတာကတော့ အဲဒီလို
ရေးထားပြီးသား ပရိုဂရမ်ကို သုံးပြီး အဘိဓာန် ထဲမှာ ရှိတဲ့
အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြည့်ကြည့်တာကို
ခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် night နဲ့ parking ပေါင်းပြီး nightparking
ဆိုတဲ့ စာလုံးမျိုး၊ Bird နဲ့ Park ပေါင်းပြီး birdpark ဆိုတာမျိုးကို
Password နေရာမှာ ဖြည့်ကြည့်ကြတာ မျိုးပါ။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Password က
အဘိဓာန် ထဲမှာ ရှိတဲ့ စာလုံးတွေကို သုံးထားတယ်ဆိုရင် အဘိဓာန်
တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် Password သူခိုးတွေရဲ့ လက်ကို
ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဘိဓာန် တိုက်ခိုက်မှုကို သုံးတဲ့ Password
သူခိုးအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်သာ မကပဲ သူကြိုက်တဲ့ အဘိဓာန်ကို
ပရိုဂရမ်ထဲမှာ အလွယ်တကူ ထည့်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်
အဘိဓာန် မသုံးပဲ မလေးစကားလုံးလို အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ရေးထားတဲ့
စာလုံးမျိုးတွေကို သုံးရင်လည်း စိတ်မချရပါဘူး။ အဘိဓာန်ထဲက စကားလုံးတွေကို
Password အနေနဲ့ မသုံးတာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Password သူခိုးတွေဟာ
အဘိဓာန် တိုက်ခိုက်မှု ထဲမှာ qwerty, asdfg စတဲ့ ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့
ဂဏန်း အစဉ်လိုက် စာလုံးတွဲတွေကိုလည်း သုံးတတ်တဲ့ အတွက် ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ
ရှိတဲ့ အစဉ်လိုက် အက္ခရာတွေကို Password အနေနဲ့ ထားခြင်းမှလည်း
ဘရုဖို့စ် ဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ စာလုံးတွေကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့
ဖြည့်ကြည့်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုပါ။ ဥပမာ အားဖြင့် ဘရုဖို့စ် နဲ့
တိုက်ခိုက်မယ့် Password သူခိုးက Password ၆လုံးစာ နေရာကို ကို0ကနေ 9
အထိ ဖြည့်ကြည့်မယ် ဆိုကြပါစို့။ ပရိုဂရမ်က Password ဖြည့်ရမယ့် နေရာမှာ 0
ကနေ 999999 အတွင်း ရှိသမျှ ဂဏန်းတွေကို အလို အလျောက် ဖြည့်ကြည့်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ password အားလုံးပေါင်းက (106 + 105 + 104 + 103+
102 + 10)= ၁၁ သန်းကျော် ရှိပါတယ်။ (10 က ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့0ကနေ 9
အထိ ဂဏန်း ၁၀ လုံးကို ရည်ညွှန်းပြီး ရှေ့ဆုံးက ပါဝါ6ကတော့ ဂဏန်း ၆
လုံးစာနေရာကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။) ဒါပေမယ့် ၁၁ သန်းကျော်ဆိုတဲ့ ဂဏန်းကို
ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖြည့်ကြည့်ဖို့ မိနစ်ပိုင်း ပဲ ကြာပါတယ်။ အကယ်၍ ဂဏန်းချည်း
သက်သက်မဟုတ်ပဲ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ စာလုံး အသေး ကိုပါ တွဲဖြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ a
ကနေ z အထိ အက္ခရာ ၂၆ လုံး ပိုလာပါပြီ။ အက္ခရာ ၃၆ လုံးအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေ
ရှိတဲ့ ဂဏန်း အားလုံးပေါင်းက (366 + 365 + 364 + 363+ 362 + 36) = 2.2
ဘီလီယံ ကျော် ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ပရိုဂရမ်ကို Run ရတဲ့ အချိန်က
ဂဏန်းချည်း သက်သက် ဖြည့်တာထက် စာရင် အဆ ၂၀၀ ကျော် ပိုကြာပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာလုံး အကြီးအသေး၊ ဂဏန်းနဲ့ ကီးဘုတ် ပေါ်က ရိုက်ထည့်လို့ရတဲ့
Special Character ၃၂ လုံးကို တွဲဖြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ စုစုပေါင်း အက္ခရာ
၉၄လုံး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ Password က ၆၉၇ ဘီလီယံ ကျော်
ရှိပါတယ်။ ဂဏန်း ချည်းသက်သက် ဖြည့်တာထက် စာရင် အဆ ၆သောင်း နီးပါး
ပိုကြာပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Password ထဲမှာ အက္ခရာ အကြီးအသေး ဂဏန်း
နဲ့ Special Character တွေ တွဲဖြည့်မယ် ဆိုရင် ဘရုဖို့စ် တိုက်ခိုက်မှုက
နေ ရှောင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း များပါတယ်။ Password အလုံးရေ ၁၂ လုံးထက်
ပိုမယ် ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Password ကို မကြာခဏ ပြောင်းပါ ဆိုတာလည်း ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့
Password ကို တစ်စုံ တစ်ယောက်က စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ နေ့တိုင်း
တိုက်ခိုက်နေမယ် ဆိုရင် တစ်နေ့မဟုတ် တစ်နေ့တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Password ကို
ဖော်နိုင်မှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် Password ကို မကြာခဏ ပြောင်းပေးတာဟာ ပိုပြီး
ဒါပေမယ့် User တွေ အတွက် အဓိက ပြသနာက အဲဒီလို အားကောင်းတဲ့ Password ကို
ဘယ်လို မှတ်မိအောင် လုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ ပြသနာပါ။ အရိုးအရှင်းဆုံး Password
ဖန်တီးနည်းကို အခုလို မှတ်သား ဖူးပါတယ်။ ဂဏန်းတွေ ပါတဲ့ အင်္ဂလိပ်
စာကြောင်းတစ်ခုကို မှတ်မိအောင် လုပ်လိုက်ပါ။ ဥပမာ She have3cats2dogs
and he is5feet 8 inches tall ဆိုတာမျိုးပါ။ ပြီးရင်
ရှေ့ဆုံးစာလုံးတွေကို ယူပါ။ sh3c2dahi5f8it ဆိုပြီး ရပါတယ်။
နာမ်စားတွေကို အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ အကြီး ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင်
ကျန်တဲ့စာလုံးတွေမှာ (a = @ , h = # , p = % , s = $ ) စတာမျိုးတွေ
အစားထိုးလိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် ခုန စာကြောင်းကနေ Sh3c2d@H!5f8!t ဆိုပြီး
အလွယ်တကူ ခိုးလို့မရနိုင်တဲ့ Password တစ်ခု ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
မမှတ်မိရင် အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းကို ပြန်စဉ်းစားပြီး အစပြန်ဖော်လို့ ရပါတယ်။
အဲဒါဆိုရင် မေးစရာ နောက်တစ်ခု ရှိလာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့
အီးမေးလ်တွေကို ဘရုဖို့စ် တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ Password ဖော်လို့ ရသလား
ဆိုတာပါ။ ရာဟူး ဂျီမေးလ်စတဲ့ အီးမေးလ်တွေမှာ ဘရုဖို့စ် တိုက်ခိုက်မှုကို
ကာကွယ်ဖို့အတွက် Catcha လို့ ခေါ်တဲ့ Word Verification ထည့်ထားပါတယ်။
Password ကို ၃ ခါ မှားနှိပ်မိရင် Word Verification ပေါ်လာပြီး Password
နဲ့အတူ ကွန်ပြူတာ ဖန်သားပြင်မှာ ပေါ်လာတဲ့ စာလုံးတွေကို
ရိုက်ထည့်ပေးရပါတယ်။ အဲဒီ လို ပေါ်လာတဲ့ စာလုံးတွေကို ကွန်ပြူတာ
ပရိုဂရမ်နဲ့ အလွယ်တကူ ဖတ်လို့မရတဲ့ အတွက် ဘရုဖို့စ်နဲ့ တိုက်ခိုက်လို့
အလွယ်တကူ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပြူတာမှာ Optical Character
Recognition လို့ ခေါ်တဲ့ ဖန်သားပြင်ပေါ်က စာလုံးတွေကို ဖတ်လို့ရတဲ့
နည်းပညာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် စာလုံးတွေကို အတည့်အတိုင်း မရေးပဲ
ရွဲ့စောင်း ရေးထားပြီး Word Verification ကို OCR နည်းပညာကို သုံးပြီး
အလွယ်တကူ ဖတ်လို့ မရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကျ
တစ်ချို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်(လုံခြုံရေး အရ အမည် မဖော်လိုပါ။) တွေမှာ Catcha
မပါပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ဘရုဖို့စ်နဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့
Password က အားနည်းနေရင် တခြားသူလက်ကို အလွယ်တကူ ရောက်သွားနိုင် ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ Catcha မပါမှန်း သိရင်
Password ကို တတ်နိုင်သမျှ အားကောင်းအောင် လုပ်ထားပါလို့ အကြံပေးချင်
Comment ဗုဒ္ဓက ပရောဖက်ပြုခဲ့သော မေရှိယ
Filed under: ဖတ်စရာမှတ်စရာ ebook ကဏ္ဍ, သုတ by bokyat — Leaveacomment	July 7, 2011
Comment Microsoft Word Readabality (myanmaritmen.org မှ ko saw htun aung ရေးသားသည်)
Filed under: သုတ by bokyat — Leaveacomment	January 13, 2011
Microsoft Word ကနေ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ စာကိုသာမန်လူ ဘယ်လောက်များများ နားလည်နိုင်သလဲ ဆိုတာကို စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Cover letter လိုမျိုးရေးမယ်၊ report လိုစာမျိုး ရိုးရှင်းစွာနဲ့ လူတိုင်းနားလည်အောင် ရေးရမယ့် စာမျိုးရေးတဲ့အခါမှာ အသုံးတည့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Microsoft Word 2010 ထွက်လာပြီဆိုတော့ 2007 လောက်တော့ သုံးနေလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ ကျွန်တော် 2007 နဲ့စမ်းကြည့်ထားလို့ပါ။
၁။ အရင်ဆုံး option ထဲက proofing အောက်မှာ Show readability statistics ကိုတော့ no ပေးထားဖို့ လိုမယ်ဗျ။ ဒါမှကြည့်လို့ရမှာပါ။
၂။ နောက် ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာအားလုံးကို Select မှတ်ပြီး Grammar check လုပ်ရပါတယ် ဒီအတွက် Review Tab ထဲက Spelling & Grammar (F7) နဲ့ စစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
၃။ နောက်ဆုံးစစ်လို့ ပြီးသွားတဲ့အခါ Readability Statistics ကိုထုပ်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
၄။ ရလာတဲ့ result ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ရေးထားတာကို ဘယ် level မှာ ရှိလဲသိနိုင်ပါပြီ။
အင်း မြန်မာလိုမရတာတော့ ၀မ်းနည်းမိပါရဲ့ဗျာ…. http://en.wikipedia.org/wiki/Flesch%E2%80%93Kincaid_readability_test မှာ readability အဆင့် သတ်မှတ်ပုံကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်
Flesch Reading Ease In the Flesch Reading Ease test, higher scores indicate material that is easier to read; lower numbers mark passages that are more difficult to read. The formula for the Flesch Reading Ease Score (FRES) test is  Scores can be interpreted as shown below.
Reader’s Digest magazine hasareadability index of about 65, Time magazine scores about 52, an average 6th grade student’s (an 11-year-old) written assignment hasareadability test of 60–70 (andareading grade level of 6–7), and the Harvard Law Review hasageneral readability score in the low 30s. The highest (easiest) readability score possible is around 120 (e.g. every sentence consisting of only two one-syllable words); there is no theoretical lower bound on the score—this sentence, for example, taken asareading passage unto itself, hasareadability score of about 18.5. This paragraph hasareadability score of 21.7. The sentence, “The Australian platypus is seeminglyahybrid ofamammal and reptilian creature” isa24.4. This article hasareadability score of around 42.0. Many government agencies require documents or forms to meet specific readability levels. The U.S. Department of Defense uses the Reading Ease test as the standard test of readability for its documents and forms. Florida requires that life insurance policies haveaFlesch Reading Ease score of 45 or greater. Use of this scale is so ubiquitous that it is bundled with popular word processing programs and services such as KWord, IBM Lotus Symphony, Microsoft Office Word, WordPerfect, WordPro, and Google Docs. Long words affect this score significantly more than they do the grade level score.  Flesch–Kincaid Grade Level These readability tests are used extensively in the field of education. The “Flesch–Kincaid Grade Level Formula” translates the 0–100 score toaU.S. grade level, making it easier for teachers, parents, librarians, and others to judge the readability level of various books and texts. It can also mean the number of years of education generally required to understand this text, relevant when the formula results inanumber greater than 10. The grade level is calculated with the following formula: The result isanumber that corresponds withagrade level. For example,ascore of 8.2 would indicate that the text is expected to be understandable by an average student in 8th grade (usually around ages 13–14 in the United States of America). This page has the score of 12.1. The lowest grade level score in theory is −3.40, but there are few real passages where every sentence consists ofasingle one-syllable word. Green Eggs and Ham by Dr. Seuss comes close, averaging 5.7 words per sentence and 1.02 syllables per word, withagrade level of −1.3. (Most of the 50 used words are monosyllabic; “anywhere”, which occurs 8 times, is the only exception.)
Comment Excel ထဲက duplicate rows တွေ ဖျက်တဲ့ macro code လေး
Filed under: သုတ by bokyat — Leaveacomment	December 14, 2010
Delete duplicate row
2) under tools tab point the macro u will see like this
3) click the Record New Macros…
4) and then go back to tools tab , point the Macros and stop recording
5) now u need to press Alt+F8
6) u need to choose Edit u will see this screen
And then copy under red text and paste it
For RowNdx = Range(“A1″).End(xlDown).Row To2Step -1
If Cells(RowNdx, “A”).Value = Cells(RowNdx – 1, “A”).Value Then
If Cells(RowNdx, “B”).Value <= Cells(RowNdx – 1, “B”).Value Then
Rows(RowNdx – 1).Delete
7) u need to save it and close it
8) now u press Alt+F8 u will see
9) macro name is DeleteTheoldies
- Macros in must select this work book
10) Now u r ready to run (just click the Run button)
U will see wonderful things all duplicate data rows are deleted
if u want more information http://www.cpearson.com/excel/deleting.htm
သူငယ်ချင်းတစ်ချို့အတွက်ပါ ကျွန်တော်လည်း အခုမှစလေ့လာသူတစ်ယောက်ပါပဲ
အားနည်းချက်များကို သင်ကြားပြသပေးပါ။ comment မှာ ဝေမျှလို့ရပါတယ
Comment VCD ကာရာအိုကေ စာတန်းထိုးနည်း Written by Ko Thurein
Filed under: သုတ by bokyat — Leaveacomment	November 17, 2010
VCD သီချင်းတွေကို ကြည့်ရင်း သီချင်းစာသားထိုးတာတွေကို ဘယ်လိုများ လုပ်တာပါလိမ့်ဆိုပြီး အရမ်း သိချင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Adobe Premier နဲ့ Title Deko ကို သုံးလုပ်တာဆိုပြီး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ပြောလို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း Premier တင်ပြီး စမ်းကြည့် ခဲ့တယ်။ အားပါး တော်တော်လေးကို အချိန်ပေးရပါတယ်။ စာနဲ့အသံနဲ့ ကိုက်အောင် လုပ်ရတာ အတော်လေးကို လက်ဝင်ပါတယ်။ ဒါတောင် အသံအလိုက် စာသားကို highlight လုပ်တာ မပါသေးဘူး။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ပျင်းပြီး ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
ဟိုတလောက ကွန်ပျူတာဂျာနယ်မှာ ကာရာအိုကေ စာတန်းထိုးနည်း ပါလာပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ Premier နဲ့ပါပဲ။ Premier ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော် လည်းလန့်နေပြီ။ အဲဒါနဲ့ စမ်းတောင် မကြည့်တော့ပါဘူး။
ကိုယ့်မှာ သိချင်စိတ်ရှိနေလို့ပဲလားတော့ မသိပါဘူး။ မရှာဘဲနဲ့ အလွယ်နည်းလေးကို မထင်မှတ်ပဲ အခု ရလိုက်ပါပြီ။ Reader နဲ့ Feed တွေ လိုက်ဖတ်ရင်း Techpp ရဲ့ Feed မှာ အဲဒီအကြောင်းလေး ပါလာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်။ အရမ်းလွယ်တယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု ဖောက်သည်ချလိုက်ပါပြီ။
စာတန်းထိုးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Software တွေက Divxland Media Subtitler ပါ။ ပြီးတော့ VirtualDub ရယ်၊ Xvid Encoder ရယ်ပါ။ စုစုပေါင်း သုံးမျိုးပါ။ အကုန်လုံးဟာ Free ပေးတာဖြစ်ပြီး http://www.divxland.org/ မှာ ရနိုင်ပါတယ်။
စလုပ်ဖို့အတွက် Notepad ထဲမှာ Myanmar Font နဲ့ (Unicode Font သုံးမရပါ) သီချင်းစာသားတွေကို အဖြတ်လိုက် တကြောင်းချင်း ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ ပြီးရင် တစ်နေရာမှာ သိမ်းလိုက်ပါ။ နောက် Divxland Media Subtitler ကို ဖွင့်ပြီး စာသားထည့်မယ့် Video ဖိုင်ကို ဖွင့်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လိပ်ပြာ ၀ှက်တမ်း ဇာတ်ကားခွေထဲမှာပါတဲ့ ဗွီဒီယိုသီချင်းဖိုင်လေးနဲ့ စမ်းကြည့်ပါတယ်။ သူက MTV ပါ။ စာသားမပါတော့ စမ်းသပ်ဖို့ ကောင်းသွားတယ်။
ပြီးတော့ အစောက Notepad နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ စာသားဖိုင်လေးကို ဖွင့်ရပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှာ သီချင်းကို Play လုပ်ပြီး အဲဒီ Program မှာပါတဲ့ Apply ခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်၊ လွှတ်လိုက်လုပ်ပြီး အသံနဲ့ စာနဲ့ ကိုက်အောင် လုပ်ရပါတယ်။ ပြီးသွားရင် ဖိုင်ကို သိမ်းရပါတယ်။ သူက Subtitle ဖိုင်လေး တစ်ဖိုင်ကို ထုတ်ပေးပါလိ့မ်မယ်။ ဒီနေရာမှာ သတိပြုရမှာက သိမ်းတဲ့အခါမှာ ဖိုင် Format ကို SubStation Alpha ကို ရွေးရပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ File ကနေ Embed Subtitle ကို ရွေးရုံပါပဲ။ အဲဒီအခါမှာ VirtualDub Program ရှိတဲ့ နေရာကို ရွေးရတာတို့၊ Xvid Encoder ကို သုံးရတာတို့ စတာတွေကို လုပ်ပေးရပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ စာတန်းထိုးပြီးသား ဗွီဒီယိုသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ဖန်တီးလို့ ရသွားပြီပေါ့။
လုပ်နည်း အသေးစိတ်ကို http://www.divxland.org/ မှာ လေ့လာလို့ရပါတယ်။ အခု software တွေနဲ့ လုပ်တာ တွေဟာ စာတန်းထိုးရုံ သက်သက်ဖြစ်ပြီး အသံအတိုင်း highlight လုပ်တာကိုတော့ လုပ်မရပါဘူး။ ပြီးတော့ Myanmar Font တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နည်းနည်းပြဿနာ ရှိပါတယ်။ ရ မပေါ်တာတို့ ဘာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရှာကြည့်သလောက်တော့ Gandamar-Letter1 Font နဲ့ကတော့ လုံးဝအဆင်အပြေဆုံးပါပဲ။
Comment Windows7Password Recovery Written by Thurein
Windows7မှာ ကိုယ့် User Account ရဲ့ Password မေ့သွားရင် Password ကို ဖျက်ပစ်တဲ့ နည်းပါ။ သူများစက်ရဲ့ Password တွေ ဖျက်ဖို့ တင်ပေးလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရေးကြုံရင် ထုတ်သုံးဖို့ပါ။ ကျွန်တော်ဆို ဟိုတစ်နေ့က အသိတစ်ယောက်က တောင်းဆိုလို့ Google မှာ ရှာရင်းနဲ့ တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ အသုံးပြုတဲ့ Software ကတော့ Offline NT Password&Registry Editor ပါ။ Hiren 10 ခွေထဲမှာလည်း ပါပြီးသားပါ။ အခုတော့ အဲဒီ Offline NT ကို Memory Stick ထဲကို ထည့်သွင်းပြီး အသုံးပြုနည်းကို ဖော်ပြသွားမှာပါ။
Memory Stick အတွင်းသို့ Offline NT ကို ထည့်သွင်းခြင်း
ပထမဆုံး Offline NT Password & Registry Editor ကို http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/cd100627.zip ကနေ Download ဆွဲပါ။ ရလာမှာက Zip ဖိုင်ပါ။ အဲဒါကို Extract လုပ်ပါ။ ISO ဖိုင်တစ်ဖိုင် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ISO ဖိုင်ကို Extract လုပ်ပါ။ CD နဲ့ သုံးချင်သူများအဖို့တော့ အဲဒီ ISO ဖိုင်ကို Extract လုပ်စရာမလိုပါ။ အဲဒီဖိုင်ကို Burn လိုက်ရင် သုံးလို့ရပါပြီ။
Memory Stick ကို Format ချပါ။ ပြီးရင် Command Prompt ကိုဖွင့်ပါ။ အောက်ပါ Command တွေ ပေးပါ။ ဒီ Command တွေဟာ Memory Stick ထဲကို Bootloader ထည့်သွင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ Stick ကနေ Boot လုပ်လို့ ရမှာပါ။
3. select disk x (x နေရာမှာ Memory Stick ရဲ့ Disk number ကို အစားသွင်းရပါမယ်)
ပြီးရင် အစောက ISO ဖိုင်ကို Extract လုပ်တုန်းက ရလာတဲ့ ဖိုင်တွေအားလုံးကို Stick ထဲသို့ Copy ကူးထည့်ပါ။ ပြီးရင် Command Prompt ကို ဖွင့်ပြီး ဒီ Command ပေးပါ။
X:syslinux.ex –ma X: (X: နေရာမှာ Stick ရဲ့ Drive Letter ကို အစားသွင်းရပါမယ်)
ဒါဆိုရင် Stick ထဲကို Offline NT Password & Registry Editor ထည့်လို့ ပြီးသွားပါပြီ။
Stick ကနေ Boot တက်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ Offline NT တက်လာပါလိမ့်မယ်။ Screen မှာ အခုလို မြင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
* (c) 1998-2007 Petter Nordahl-Hagen. Distributed under GNU GPL v2 *
* More info at: http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/ *
* CD build date: Sun Sep 23 14:15:35 CEST 2007 *
boot nousb – to turn off USB if not used and it causes problems
boot irqpoll – if some drivers hang with irq problem messages
boot nodrivers – skip automatic disk driver loading
Enter တစ်ချက်သာ ခေါက်လိုက်ပါ။ နောက်ထပ် Driver တွေ ဆွဲခေါ်တဲ့ စာတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဆုံးမှာတော့ အောက်မှာပြထားသလို ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာ Windows ရှိနေတဲ့ Partition ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ အများအားဖြင့်တော့ 1 လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ရတာပါ။ အဲဒီအခါ နောက်ထပ် စာတွေပေါ်လာပြီး အောက်မှာပြထားသလို ထပ်ရွေးခိုင်းပါလိမ့်ဦးမယ်။
1 – Password reset [sam system security]
2 – RecoveryConsole parameters [software]
q – quit – return to previous
1 လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ နောက်ထပ် စာတွေပေါ်လာပါလိမ့်ဦးမယ်။ အောက်မှာ ပြထားသလို ထပ်ရွေးခိုင်းပါလိမ့်ဦးမယ်။
Loaded hives: 1 – Edit user data and passwords
2 – Syskey status & change
3 – RecoveryConsole settings
9 – Registry editor, now with full write support!
q – Quit (you will be asked if there is something to save)
1 လို့ ရိုက်ပြီး Enter ထပ်ခေါက်ပါ။ အဲဒီအခါ Windows7ထဲမှာရှိတဲ့ User Account တွေကို အောက်မှာ နမူနာ ပြထားသလို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ် Password ဖျက်မယ့် user account နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ ဥပမာ Administrator လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ကြည့်ပါ။ နောက်ထပ် အခုလို Menu ထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်ဦးမယ်။
Password ကို Clear လုပ်မှာမို့ 1 လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ Password Clear ဖြစ်သွားပါပြီ။ ရပါပြီ။ သိမ်းပြီး ထွက်ဖို့အတွက် Shift+1 ကို နှိပ်ပါ။ နောက်ထပ် Menu တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာရင် ထွက်မှာမို့ q လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
အပေါ်က ပြထားသလို ထပ်ပေါ်လာရင် y လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။
ပြီးသွားပါပြီ။ အဲဒီ Account ရဲ့ Password ပျက်သွားပါပြီ။
ဓားတစ်ချောင်းလိုပါပဲ။ အဲဒီဓားက ဆရာဝန်လက်ထဲ ရောက်သွားရင် လူ့အသက်ကယ်ဖို့ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီဓားက လူမိုက်တစ်ယောက် လက်ထဲရောက်သွားရင် လူသတ်ဖို့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ကို ဓားတစ်ချောင်း ပေးလိုက်တာပါ။
Windows7တင်ပြီးတာနဲ့ စာဖတ်သူအတွက် အသုံးဝင်မယ့် Software တွေ တင်ပြီးသား ဖြစ်သွားမယ်၊ ပြီးတော့ Windows Setting တွေကိုလည်း စာဖတ်သူစိတ်ကြိုက် ပြင်ထားပြီးသား ဖြစ်သွားမယ်။ ကဲ အဲဒီနည်းလမ်းလေး သိချင်ရင်တော့ Read more လေးကိုသာ နှိပ်လိုက်တော့ဗျို့။
ဒီနည်းလမ်းလေးကို သိထားခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ မစမ်းသပ်ဖြစ်တာနဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Black XP ကို စတွေ့ဖူးခါစက သူ့ကို အရမ်းသဘောကျမိတာကနေ ဒီနည်းလမ်းကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ Black XP ကို သုံးဖြစ်တဲ့သူတွေ မှတ်မိကြမှာပါ။ သူက Windows တင်ပြီးတာနဲ့ Software တွေ တင်ပြီးသား။ ပြီးတော့ Windows တင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း ဘာဘာညာညာတွေ မမေးဘူးလေ။ Windows XP မှာ Windows တင်နေရင်း မေးတဲ့ဟာတွေ (Product Key, Regional Setting etc) တွေကို Answer file ရေးပြီး ဖြေထားလို့ရတာကိုတော့ MCSE စာအုပ်ကြီး ဖတ်ပြီး သိခဲ့တာမို့ အဲဒါဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ Windows တင်ပြီးတာနဲ့ Software တွေ တင်ပြီးသားဖြစ်နေတာကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အဆန်းဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ Black XP ကို ဘယ်လိုများလုပ်သလဲဆိုတာကို Internet မှာ မွှေကြည့်တဲ့အခါမှာ Windows Post Install ဆိုတဲ့ Software ကိုသုံးပြီး ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ WPI ကို download ဆွဲပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကြာတာမို့ ကြာရှည်မသုံးတော့ပါဘူး။
အဲဒါနဲ့ ကြားထဲမှာ Windows7ကြီး ထွက်လာရော။ Windows7မှာရော အဲဒီလို လုပ်ရလားဆိုပြီး Internet မှာ မွှေကြည့်ပါတယ်။ Windows7Post Install နဲ့ ရှာမရတော့ Windows7Pre Install ဆိုပြီး keyword ပြောင်းပြီး ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာ Microsoft Website ကနေ Windows7AIK(Automated Installation Kit) ဆိုတာကို စတွေ့ပါတော့တယ်။ AIK က Windows7တင်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Software တွေ၊ Driver တွေ ပါလာအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ Microsoft က ပြောပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ၀မ်းသာအားရ Download ဆွဲမယ်ကြံတော့ 1 GB ကျော်ကြီး ဖြစ်နေတာ့ အံ့လည်း အံ့သြ၊ ဆွဲဖို့လည်း အချိန်မရ ဖြစ်နေပါတယ်။ အားတဲ့နေ့တော့ ဆွဲမယ်ကွာဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ တေးထားလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သင်္ကြန်ကျတော့ အလုပ်က လည်းအားနေတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီ AIK ကို နေ့ရောညရော ရင်းပြီး ဆွဲပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ သုံးရက်လောက် ကြာပါတယ်။
Download ဆွဲပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ စမ်းသပ်ကြည့်ပါတယ်။ Overview လေး နည်းနည်းပါးပါးလေး ဖတ်ကြည့်ပြီး ခေါင်းမူးသွားတာနဲ့ ပြန်ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းမမူးမှ နေရောလေ၊ AIK ကို သုံးဖို့အတွက် ကွန်ပျူတာနှစ်လုံး လိုမယ်၊ Network ချိတ်ရမယ်၊ ပြီးတော့ ဟိုဘက်စက်က Windows ကို Capture ဖမ်းရမယ် ဘာညာနဲ့ တော်တော်လေးကို ရှုပ်တာကိုး။
ဒါပေမဲ့ အခုရက်ပိုင်းမှာ လူကလည်း အားနေတာနဲ့ သေသေချာချာ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စမ်းကြည့်တော့မှ အရမ်းလွယ်တာကို တွေ့သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ အခုလို Software တွေ ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ Windows ခွေလေး ဖြစ်လာဖို့ အတွက် 1GB ကျော်ရှိတဲ့ AIK ကို Download ဆွဲစရာမလိုဘူးဆိုတာကို စမ်းသပ်နေရင်းနဲ့ သိလာတော့မှ ဒီ Article လေး ကို ရေးမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ တကယ်လို့ 1GB ကျော်ရှိတဲ့ AIK ကြီး ကို Download ဆွဲမှ လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ဒီ Article လေးကို ရေးဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကဲ.. လေကြောရှည်တာ အဲ နိဒါန်းပျိုးတာ များကုန်ပြီ။ လုပ်နည်းအသေးစိတ်လေးကို Step by Step ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ တစ်ခု မှာလိုတာက အောက်မှာပြထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို Advanced User တွေသာ စမ်းသပ် ကြည့်စေလိုပါတယ်။ ပြီးတော့ မထင်မှတ်ဘဲ ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကိုလည်း ကျွန်တော်က တာဝန်မယူပါ။ ကျွန်တော် စမ်းသပ်တုန်းကတော့ အားလုံးဟာ ချောချောမောမော အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အောက်မှာပြထားတဲ့ နည်းလမ်းကို စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဘယ် Website မှာမှ ရှာတွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လေးညလောက် အမျိုးမျိုးစမ်းပြီးမှ အဖြေတွေ့ခဲ့ပြီး အဆင်ပြေခဲ့တာပါ။ အစပိုင်းက Microsoft က ပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်တာပါ။ အဆင်မပြေပါ။ နောက် Microsoft ပြောတာလည်း ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါလေဆိုပြီး သံသယ၀င်ပြီး ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်လေးနဲ့ စမ်းမှ အဆင်ပြေခဲ့တာပါ။
၁။ Windows7တင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာနှစ်လုံး ရှိရပါမယ်။ နှစ်လုံးစလုံးဟာ Network ချိတ်ထားရပါမယ်။
၂။ 256MB အနည်းဆုံးရှိတဲ့ Memory Stick တစ်ချောင်း လိုပါမယ်။ အဲဒါနဲ့ Format ကြိုရိုက်ထားပါ။
၃။ ကွန်ပျူတာနှစ်လုံးကို စိတ်ထဲမှာ နာမည်ပေးထားလိုက်ပါ။ တစ်လုံးကို Reference Computer လို့ သတ်မှတ်ပြီး ကျန် တစ်လုံးကို Technician Computer ဆိုပြီး သတ်မှတ်လိုက်ပါ။
၁။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ XML ဖိုင်ကို download ဆွဲပြီး Memory Stick ထဲ ထည့်ပါ။ Root Directory ဆောက်ပြီး ထည့်ပါ။ Folder တွေ ဘာတွေ ဆောက်ပြီး မထည့်ပါနဲ့။ ဖိုင်နာမည်ကို မပြောင်းပါနဲ့။ အခုဖိုင်လေးကို Answer File လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Windows တင်တဲ့အခါမှာ မေးမယ့်မေးခွန်းတွေကို သူက ဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။
၂။ Refrence Computer ရဲ့ C: Partition ကို Format ရိုက်ရမှာမို့ ယူစရာရှိတာ ယူထားပါ။ Refrence Computer မှာ Memory Stick ကို ထိုးတပ်လိုက်ပါ။ ရှေ့အပေါက်မှာ မတပ်ပါနဲ့။ နောက်အပေါက်မှာ တပ်ပါ။ ပြီးတော့မှ ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်ပါ။ Windows7Installtion DVD ခွေထည့်ပြီး Windows တင်ပါ။ Windows တင်တဲ့အခါ Version ရွေးခိုင်းတဲ့အခါမှာ Windows7Ultimate ကို ရွေးပါ။ C: Partition ကို Delete လုပ်ပါ။ New ပြန်ဆောက်ပြီး အဲဒီ C: ထဲမှာပဲ Windows တင်ပါ။
၃။ ထုံးစံအတိုင်း Windows တင်တာကို ပြီးအောင် စောင့်ပါ။ Windows7တင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ခါတိုင်းနဲ့မတူ Desktop တက်လာတဲ့အခါ အောက်မှာပြထားတဲ့ Box လေးတစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ။ Windows ကိုလည်း သတိထားကြည့်လိုက်ပါ။ Aero တွေဘာတွေ ပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၄။ ရပါပြီ။ ကြိုက်တဲ့ Software တွေ တင်ပါ။ Driver တွေ တင်ပါ။ (Driver က မတင်လည်းရပါတယ်) Windows ကို Setting ချိန်ပါ။ ဥပမာ My Computer icon ကို Desktop ပေါ်တင်တာတွေ၊ Explorer မှာ Menu bar ဖော်တာတွေ၊ Taskbar buttons တွေကို never combine လုပ်တာတွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကိုယ်နှစ်သက်သလို Windows ကို ပုံစံချပါ။
၅။ အားလုံး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားဆိုရင် C:WindowsSystem32Sysprep ဆီသွားပြီး sysprep ဆိုတဲ့ program ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ System Preparation Tool ပွင့်လာရင် System Cleanup Action မှာ Enter System Out of Box ကို ရွေးပါ။ Generalize ကို အမှန်ခြစ်ပါ။ Shtutdown Options မှာ Shutdown ကို ရွေးပါ။ ပြီးတာနဲ့ OK နှိပ်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ Sysprep က Hardware Configuration တွေအားလုံးကို Cleanup လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ခဏစောင့်ပါ။ ပြီးတဲ့အခါမှာ ကွန်ပျူတာက Shutdown ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကွန်ပျူတာကို လုံးဝ ပြန်မဖွင့်ပါနဲ့။
၆။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ WinPE ကို Download ဆွဲပါ။ ရလာတဲ့ ISO ဖိုင်ကို စီဒီခွေနဲ့ ပြန် Burn ပါ။ အဲဒါကိုတော့ Technician Computer မှာ လုပ်ရမှာပေါ့လေ။
၇။ WinPE စီဒီခွေလေး ရပြီဆိုရင် အစောက Reference ကွန်ပျူတာမှာ ဒီ WinPE စီဒီခွေလေးနဲ့ Boot တက်လိုက်ပါ။ WinPE ပွင့်လာတာကို စောင့်ပါ။
၈။ WinPE တက်လာပြီဆိုရင် Windows ရှိနေတဲ့ Drive ကိုရှာပါ။ လက်ရှိ WinPE ခွေ ထည့်ထားတဲ့ Drive ရဲ့ Drive Letter ကိုလည်း သိအောင်ကြိုးစားပါ။ အဲဒါလေးက လက်ဝင်မယ် ထင်ပါတယ်။
၉။ ပြီးရင်တော့ ဒီ Command လေး ပေးလိုက်ပါ။
X:imagex.exe /capture Z: Z:myimage.wim “my Win7 Install” /compress fast /verify
Command ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ Reference ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိတဲ့ Windows Partition ကို myimage.wim ဆိုတဲ့ ဖိုင်အနေနဲ့ Image ဖန်တီးပြီး သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ X: နေရာမှာ စာဖတ်သူရဲ့ CD Driver Letter ကို အစားထိုးရမှာဖြစ်ပြီး Z: နေရာမှာတော့ Windows ရှိနေတဲ့ Partition ရဲ့ Driver Letter ကို အစားသွင်းရမှာပါ။
၁၀။ ရပါပြီ။ အဲဒီ myimage.wim ဆိုတဲ့ GB နဲ့ချီပြီး ရှိနေတဲ့ဖိုင်ကြီးကို Network ကနေတစ်ဆင့် ဟိုဘက် Technician Computer ကို လှမ်းပို့တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Technician ကွန်ပျူတာဘက်သွားပြီး D: ထဲမှာ Images ဆိုတဲ့ Folder တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး အဲဒါကို Share လုပ်ပါ။ Write Permission ပေးပါ။
၁၁။ အဲဒီ Technician Computer ရဲ့ Network Share ကို ဒီဘက် Reference Computer မှာ Network Drive အနေနဲ့ ဖန်တီးပါမယ်။ အဲဒီအတွက် Command က ဒါမျိုးပါ။
Net use Y: \_network
၁၂။ Username နဲ့ Password တောင်းရင် ဖြည့်ပေးပါ။ ဟိုဘက်စက်(Technician Computer) ရဲ့ Username နဲ့ Password ကို ဖြည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Username ထည့်ပေးတဲ့အခါမှာ computernameusername ဆိုတဲ့ Format နဲ့ ထည့်ပေးရမှာပါ။
၁၃။ ရပြီ။ ဟိုဘက်ကို လှမ်းထည့်မယ်။ အဲဒီအတွက် Command ကတော့
Copy X:myimage.wim Y:
ဒါဆိုရင် အားလုံး ပြီးသွားပါပြီ။ နောက်ဆိုရင် ကိုယ့် Network ထဲမှာ ရှိတဲ့ Computer တွေကို Windows တင်မယ်ဆိုရင် အရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲ Technician Computer မှာ သိမ်းထားခဲ့တဲ့ Image ကို လှမ်းဆွဲခေါ်ပြီး တင်လိုက် ရုံပါပဲဗျာ။
အဲဒီအတွက် သင့် Network ထဲက Windows တင်လိုတဲ့စက်မှာ WinPE ခွေနဲ့ Boot တက်ပြီး သုံးရမဲ့ Command တွေကတော့
format fs=ntfs label=”Windows”
net use y: \_network_shareimages
copy y:myimage.wim d:
e:imagex.exe /apply d:myimage.wim 1 d:
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေလောက်ကြမယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။
Comment Booklet Printing Written by Thurein
Booklet Printing ဆိုတာက စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်အောင် Print ထုတ်နည်းကို ပြောတာပါ။ အများအားဖြင့် ကွန်ပျူတာသမားတွေက (ကျွန်တော်အပါအ၀င်) Printer နဲ့ စာအုပ်ထုတ်ရပြီဆိုရင် အလွယ်နည်းဖြစ်တဲ့ A4 ကို ကျောကပ်ထုတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီနည်းက လွယ်ကူပေမယ့် စာအုပ်က A4 Size ကြီး ဖြစ်နေတော့ သယ်ရပြုရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ Word နဲ့ Adobe Reader ကို ပေါင်းသုံးလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ အလယ်ချုပ် စာအုပ်အသေးလေး တစ်အုပ်ကို ကိုယ့် Printer နဲ့ ထုတ်လို့ရပါတယ်။ A4 တစ်ရွက်မှာ စာမျက်နှာ နှစ်ခုနှုန်းနဲ့ ကျောကပ်မှာဆိုတော့ လေးမျက်နှာ ရပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံးကတော့ စာစီရမှာပေါ့။ Word မှာ စာတစ်လုံးမှ မရိုက်သေးခင် Page Setup လုပ်ပါ။ Page Setup dialog box ရဲ့ Margins tab ထဲမှာ Multiple Pages ဆိုတဲ့ list box ကို ဖွင့်ချလိုက်ပြီး Book fold ကို ရွေးလိုက်ပါ။ ကျန်တဲ့ Paper Size ပြောင်းတာ၊ Margins သတ်မှတ်တာတွေကိုတော့ ဆက်လုပ်လိုက်ပေါ့။ အဲဒီအခါမှာ A4 တစ်ဝက်ပဲရှိတဲ့ စာမျက်နှာအသေးလေး ရလာပါလိမ့်မယ်။ စာတွေ ရိုက်ထည့်မယ်။ နောက်တစ်မျက်နှာကလည်း A4 အသေးလေး ဖြစ်နေမှာပါ။ ပထမစာမျက်နှာနဲ့ ဒုတိယစာမျက်နှာက Facing ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ စာတွေ စီသွားမယ်ပေါ့။ နောက်ဆုံး Header Footer ထည့်မယ်၊ Page Number တွေ ထည့်မယ်ပေါ့။ သတိပြုရမှာက စာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာက စုံဂဏန်းဖြစ်ရပါမယ်၊ ပြီးတော့ ၄ ရဲ့ ဆတိုးကိန်းတွေ ဖြစ်ရပါမယ်။ (ဥပမာ ၂၄, ၂၈ တို့ပေါ့) ပြီးရင်တော့ PDF ပြောင်းလိုက်ပါ။ အဲဒီ PDF ဖိုင်ကို Adobe Reader နဲ့ဖွင့်ပါ။ File>Print ကို ရွေးပါ။ Page Scaling ထဲက Booklet Printing ကို ရွေးပါ။ Booklet subset ကနေ Front sides only ကို ရွေးပါ။ Print ထုတ်လိုက်ပါ။ အဲဒီအခါ စာရွက်တစ်ရွက်မှာ စာမျက်နှာ နှစ်မျက်နှာနှုန်း ထုတ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး စာအုပ်ရဲ့ ပထမဆုံးစာမျက်နှာနဲ့ နောက်ဆုံး စာမျက်နှာကို သူ့အလိုလို တွဲပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ Print ထုတ်ပြီးတဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေကိုပဲ ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး Printer ထဲ ပြန်ထည့်ပါ။ (ကျောကပ်မယ်လေ) Adobe Reader မှာ File>Print ကို ပြန်ရွေးပါ့မယ်။ Booklet Printing ကိုပဲ ရွေးပါ။ သို့ပေမဲ့ ဒီတစ်ခါကျ booklet subset ကို Back Sides only ကို ရွေးပါ။ Reverse Pages ကို အမှန်ခြစ်ပါ။ ပြီးရင် Print ထုတ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ပြီးသွားပါပြီ။ ထွက်လာတဲ့ စာရွက်တွေကို ခေါက်ချိုး ခေါက်လိုက်တဲ့အခါ စာမျက်နှာနံပါတ်တွေ မှန်ကန်စွာ စီထားတဲ့ စာအုပ်အသေးလေး တစ်ခု ရလာပါလိမ့်မယ်။ မိမိဆီမှာ ရှိပြီးသား PDF ဖိုင်တွေကိုလည်း Adobe Reader ကိုသုံးပြီး ဒီ Booklet Printing နဲ့ စာအုပ်အသေးလေးတွေ ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ (ဖတ်ရုံနဲ့တော့ နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တွေ့လုပ်ကြည့်မှ သိသွားပြီး ဒီနည်းလေးကို ကြိုက်သွားပါလိမ့်မယ်) ကိုသူရိန်
Comment မြန်မာစကားပုံ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာ
Filed under: သုတ by bokyat — Leaveacomment	October 14, 2010
သူငယ်ချင်းတို့ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ရဲ့ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာ၊ ဗဟုသုတ လေးတွေကို တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကို ဝေမျှချင်ရင် အသုံးပြုလို့ရအောင်ပါ။
ပြောခဲ့ပါ	John HtetCreate Your Badge
ကျော်ချင်ခွချင် ဆိုက်ကားနင်း	့http://bokyatproxy1.appspot.com